महिनाबारी पछि कुन दिनको से- क्स सबैभन्दा सुरक्षित ? – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / महिनाबारी पछि कुन दिनको से- क्स सबैभन्दा सुरक्षित ?
admin4weeks ago	स्वास्थ्य Leaveacomment 305 Views
महिनावारी हुनु अघि र भएपछिका केही निश्चित दिनमा यौ-न सम्पर्क गर्नाले गर्भ रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ । जसलाई अहिलेका आधुनिक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले विज्ञहरुले परिवार नियोजनको एउटा विकल्प अर्थात ‘सेफ से-क्स पिरियड’ भनेर मानेका पनि छन् ।
आज हामीले त्यहि कुरामा चर्चा गर्दैछौँ, कुन दिनको से-क्स सुरक्षीत हुन्छ ?
१. महिनावारी भएको पहिलो सात दिन : महिनावारी भएको पहिलो सात दिन सुरक्षीत पिरियड हो तर यो बेला महिला शारीरिक र मानसिक रुपले पनि यौ-नसम्पर्क गर्नु राम्रो मानिदैन् । त्यसैले यो बेलामा यौ-नसम्पर्क नगरेको राम्रो ।
२. महिनावारी पछि आठौँ, नवौँ र दशौँ दिन : यी दिनमा साधनविना गरिने सेक्स तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिन्छ । नुसन्धानकर्ताहरुले यी दिनमा गरिने यौ-नसम्पर्कका बेला गर्भरहने सम्भावना कम अर्थात ४० देखि ६० प्रतिशत मात्रै रहने बताउने गरेका छन् ।
३. महिनावारी भएको ११ देखि १६ दिन : साधनविना गरिने यो बेलाको यौ-नसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । विज्ञहरुले डिम्व बाहिर आएर बस्ने भएकोले यो बेलामा हुने साधनबिनाको यौ-नसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना ८० प्रतिशत सम्म रहने बताउछन् ।
४. १७ देखि १९ दिन : साधनविना गरिने यौ-नसम्पर्कमा गर्भरहने सम्भावना कम त रहन्छ तर ढुक्कै चाहि हुँदैन । विज्ञहरुले यसबेला पनि गर्भरहने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत रहने बताउछन् ।
५ . २० देखी महिनावारी नहुँदासम्मको दिन : यसबेला साधनविना गरिने यौ-नसम्पर्कले अरु बेलाको तुलनामा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । अर्थात विज्ञहरुले यतिवेला साधनविना गरिने यौ-नसम्पर्कले गर्भरहने सम्भावना सून्य देखि ५ प्रतिशत मात्रै रहन्छ ।
नोट : विभिन्न अनुसन्धानले सुरक्षित र असुरक्षित समय र दिन तोके पनि सबैमा यो लागू हुन्छ भन्ने छैन । सून्य देखि ५ प्रतिशत सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । त्यसैले परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन अपनाउनु सबैभन्दा भरपर्दो हुन्छ । अर्कोकुरा सेफ से-क्स भनेको गर्भ नरहने समयलाई संकेत गरिएको हो । यसले एचआइभी एड्स तथा अन्य यौ-नरोगको सम्भावनालाई रोक्न सक्दैन । -नेपाली हेल्थ
Previous राष्ट्रपतिले प्रचण्ड पत्नी सीतालाई किन दिइन् पदक ?
Next पेटको बोसो घटाउने हो ? दैनिक खानुहोस् यी ५ कुरा